Iyini imifula yomkhathi? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe sithathwe yisathelayithi i-GOES 11.
I-Los imifula yasemkhathini (RA, noma i-AR ku-English Atmospheric Rivers) yizindawo ezincane zomswakama ezigxile emkhathini. Ziqukethe inani elikhulu lomhwamuko wamanzi, yingakho zingadala izinkinga eziningi ezindaweni ezisogwini.
Sazise ukuthi iyini imifula esemkhathini, nokuthi ingadala muphi umonakalo.
1 Iyini imifula yomkhathi?
2 Yimuphi umonakalo abangawenza?
Imifula yasemkhathini ibhekele ukuthuthwa okuvundlile komphunga wamanzi ngaphandle kwezindawo ezishisayo, imvamisa phakathi kwezindawo ezinkulu zokugeleza komoya okuhlukile. Imvamisa zingamakhilomitha amaningana ubude namakhulu amakhilomitha ububanzi, ngakho-ke ngayinye yazo ithwala amanzi amaningi kakhulu kunoMfula i-Amazon.
Yize zimboza kuphela u-10% wesilinganiso seplanethi, zidlala indima ebaluleke kakhulu ezinhlelweni zemvelo emhlabeni jikelele, njengoba zimelela ngaphezu kwe-90% yomhwamuko wamanzi othuthwa usuka enyakatho uye eningizimu.
Yimuphi umonakalo abangawenza?
Yize imifula eminingi yasemkhathini ibuthaka futhi ngakho-ke ilusizo ekuhlinzekeni imvula ezogcwalisa imithombo ngamanzi okuphuza ezifundeni abadlula kuzo, kwesinye isikhathi ingadala izinkinga eziningi. Izikhukhula, ukuguguleka kwenhlabathi, ukulahleka kwempahla, futhi kungabulala abantu nezilwane, njengoba kwenzeka muva nje eSpain.
NgoDisemba 18, 2016, omunye wale mifula wenza umonakalo omkhulu eningizimu naseningizimu-mpumalanga yenhlonhlo naseBalares. Ngaphezu kuka-120l / m2 kwehle emahoreni ayishumi nambili ezifundeni eziningi, kwadala izikhukhula nokufa kwabantu abathathu.
Imifula esemkhathini iyingxenye yomhlaba. Ngenxa yabo, sinamanzi amaningi ezifundeni ezahlukahlukene. Uke wezwa ngabo?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Iyini imifula yomkhathi?